Fandraisana fanohanana an'ny zoro - Mpanamboatra mpanohana, mpamatsy, China
Io sandrin-trandraka io dia tsy vitan'ny miaro ny sandrinao, fa koa mitondra malefaka anao. Miaraka amin'ny fitsapana matihanina dia mahomby amin'ny fiarovana UV. Afaka manao fanatanjahan-tena amin'ny tara-pahazavana mahery ianao, nefa tsy manahy momba ny hoditrao. Ny dingana faran'izay malefaka sy malefaka dia mahatonga ity akanjo ity ho malefaka sy avo tanjaka, izay mihena tsy misy fanakorontanana. Miaraka amin'ny hantsana tsy mipetaka ao anatiny, ny satroka dia tsy hihetsika amin'ny fanazaran-tena.
Pad pad hexagonal, miadana sy manaparitaka ny fiantraikan'ny hery any ivelany mandritra ny fanatanjahan-tena. Izy io no farany pad miaraka amin'ny volavola padom-borona mahery vaika kokoa ho an'ny fiarovana bebe kokoa amin'ny fanatanjahantena. Lamba mikrôloika tsy manam-paharoa, hatsembohana haingana fa tsy miadana sy milamina ny hoditrao. Ny fantsom-peo mavesatra dia mahomby amin'ny fisorohana ny sandry tsy hampidina mandritra ny hetsika.
Ny fehikibo satroka nylon
Ny lamba fofonaina be dia be dia be mandoka ny hatsembohana ary mitazona ny sandrinao sy maimaim-poana, ny fampiakarana diplaoma dia manatsara ny fihodinan'ny fiverenan'ny haingana haingana, ny fanohanana tsara ny fiaretan'ny hozatra. Ny famolavolana teknisianina manokana dia mifangaro amin'ny tonon-taolana samihafa. Ny fehikibo mahitsy dia tery sy matanjaka ary manakana ny sakan-tànana tsy hiraviravy amin'ny sandrinao. Ny fiarovana feno dia mamelaka ny fanaintainana siku.